Mota dzaVolkswagen Dzichakwidzwa seichi - RayHaber
mushaTURKEYCentral Anatolia Region26 EskisehirMota dzaVolkswagen Dzichakwirwa seichi
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 26 Eskisehir, Central Anatolia Region, Railway, Motokari Motokari, GENERAL, musoro wenyaya, TURKEY, ngoro 0
mota dze volkswagen dzichatakurwa sezvizvi
Turkey locomotive uye Engine Industry se (TULOMSAS), hofori yokuGermany Volkswagen motokari kuti anogadzirwa fekitari itsva wainyatsotaura hwaizogadzwa muTurkey vanotarisirwa kutakura "maviri-storey ngoro" kumumvuri mifananidzo, kekutanga muna HaberTürk ... Pano muTurkey, TULOMSAS ' mifananidzo yemareta maviri ekuchengetera yakagadzirwa nemaTurkey mainjiniya, matekinoroji nevashandi muEskişehir zvivakwa.
Nezve nhau ya Olcay Aydilek kubva Habertürk Click
Metrobus yakaramba iri mumugwagwa ... Metrobus yakatora hupenyu ... Metrobus yakafanana, metrobus yakadaro, chii ichi metrobus 30 / 07 / 2012 Down Metrobus, Metrobus akagara nomugwagwa ... ... vakatora Metrobus Metrobus Metrobus anogona ... itii, Metrobus Metrobus basa seizvi ... Chii ichi? Sahi uyo akapa zita iri bhasi refu iyo? Ndaida kunyora nyaya zita iroro nhasi ... takanzwa kakawanda mumakore achangopfuura, kunyange asina kubatsira Metrobus mhosva, kana muchida kuziva nyaya zita iroro inowira kunze mutauro, ndakafunga. *** On nokuda chinogumbura abuda, rine mapeji musi Facebook, Limoni akatsanangura mhando nyaya muduramanzwi, pakatangwa Inside zvokufungidzira, zvikuru anenge uneventful zuva, Metrobus ... *** Istanbul Metropolitan Municipality kuti zviite chokufambisa, vanhu vake zvakachipa uye nechokwadi kuti kufamba mu kunyaradzwa Ko zita remashibusi rinobva kupi? Için
OMSAN Inotakura Cars neTare 25 / 12 / 2013 OMSAN Inotakura Motokari Nechitima: OMSAN yakashandura motokari dzekutakura motokari dzinoshandiswa mumotokari yemotokari muRomania. Turkey tiite motokari logistics kambani OMSAN, kwakawedzera chitsva munhu ayo zvakatipoteredza ushamwari uye zvemakwikwi nemiitiro. Environmental ruzivo zvakakwirira, iyo akaita zita chaiparira OMSAN yemakwikwi tsika, kunze pakati zvengarava ose Constanta uye Pitesti muRomania paakatumwa motokari chokufambisa ngoro kuti kushandiswa motokari senga. Ngoro idzi dzichagadzirawo gumbo rezvitima motokari yekutakura motokari yemugwagwa pakati pePiteşti / Romania uye Orhanlı / Istanbul. OMSAN Vehicle Transports Manager Kürşad ÜNLÜ yakataura kuti vacharamba vachigadzirisa matanho ekugadzirisa ayo anoita kukosha kwevatengi vavo uye
Nyika Dzakanyanya Kunaka uye Dzisingaori Ngoro Dzosangana paQuail 21 / 08 / 2019 Iyo Quail, 17, inoratidzwa seimwe yeakakurumbira motorsport zviitiko munyika. nguva nePeninsula Hotera. James Masden, Mark Webber, Hannah Bronfman naBrendan Fallis vakapinda chiitiko ichi, chakaverengera chakasarudzika uye chisingawanzo kuunganidzwa kubva pasi rese. NePeninsula Hotera 17. nguva dzakaitirwa pachiitiko cheQuail muCarmeri Valley California. Kuunza pamwe mota dzemitambo uye vanofarira vemotokari kutenderera pasirese, chiitiko chacho chisingawanzo zvidimbu uye chisingakanganwike classics.
419 mutakuri achaendeswa kune imwe nzvimbo kuAnkara-Istanbul YHT 27 / 07 / 2014 Vatakuri ve419 vachaendeswa kuAnkara-Istanbul YHT line panguva imwechete: Vatakuri ve40 vachakwanisa kufamba pakati peAnkara neIstanbul mumaawa matatu uye 419 maminitsi. Pachava nemapoka mana akasiyana ematokiti emakumbo matanhatu engoro. IAnkara-Istanbul yakakwirira-motokari inotenderera yakazaruka pakati peAnkara neIstanbul kwemaawa matatu 40 maminiti. Ankara-Eskişehir chikamu chemakiromita 533 kubva kuAnkara-İstanbul YHT mutsara wemakiromita 245 akaiswa mubasa pa 2009. Pachava nemigumo mapfumbamwe muLelalı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, İzmit, Gebze uye Pendik. Muchikamu chekutanga, kumira kwekupedzisira kuchava Pendik uye gare gare chiremba chichava kuSöğütlüçeşme station ini
Ankara-Izmir YHT Project inorongwa kutakura vatengesi vane mamiriyoni e6 gore negore 13 / 06 / 2012 High Speed ​​Train (YHT) Eskisehir, Konya, akazoshandura nzira kuenda kuIzmir. Apo purojekiti ichizadzika, 8-10 pakati pemaguta maviri ichaderera kubva ku3 kusvika kune imwe nehafu yenguva. Nhanho yekutanga yakatorwa YHT pakati peIzmir neAnkara. Chirongwa chekutanga chetambo, Ankara-Afyonkarahisar, chakapedzwa. Chikamu chekuvaka chemutsara chakasimwa zvakare. Kunyange zvazvo mabasa echikamu chechipiri cheprojekiti ari kuitika, kuvakwa komugero inotarisirwa kuzadziswa nekukurumidza. NeAnkara-İzmir YHT Project inosanganisira Ankara-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Uşak uye Uşak-Manisa-İzmir, chirongwa cheAnkara-İzmir YHT chinorongwa kutakura vatengesi vane mamiriyoni gumi neYHT pagore. Nguva yekufamba pakati peAnkara neIzmir nehuwandu hwemakiromita e3 ndeyedzi 6 maawa
Eurasia Rail iri muKonya Yekutanga Nguva ku2021
Metrobus yakaramba iri mumugwagwa ... Metrobus yakatora hupenyu ... Metrobus yakafanana, metrobus yakadaro, chii ichi metrobus
OMSAN Inotakura Cars neTare
Nyika Dzakanyanya Kunaka uye Dzisingaori Ngoro Dzosangana paQuail
419 mutakuri achaendeswa kune imwe nzvimbo kuAnkara-Istanbul YHT
Ankara-Izmir YHT Project inorongwa kutakura vatengesi vane mamiriyoni e6 gore negore
Huge teknolojia huru kubva kuChina, 1200 ichaendesa vatakuri (Vhidhiyo)
Ford Cargo kuendeswa neTurkey-Russian Partnership (Photo Gallery)
Vana Kuenda Kuchikoro neChina Car
Adapazarı Train Station Project ichaendeswa mberi uye kusati yatanga kusati yatanga mazai